Alahady faharoa amin’ny Karemy – 01/03/2015 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Marihana etoana fa makasika «ny fihovanan’i Jesoa tarehy » no voaboasatsika amnin’izao famelabelaran-kevitra izao, io no fototra hiangantsika. Ny fanontaniana mety hipetraka ary rehefa izany dia ireto : Fa nahoana ny alahady faharoa ny Karemy no ampidirina ny tantatra ny fihovan’i Jesoa tarehy raha toa ka tokony ho amin’ny volana aogositra no fankalazain’ny fiangonana izany? Manambara inona amin’ny fiainanatsika Kristianina izany fihovan’i Jesoa tarehy izany ? Ary inona no hifandraisany amin’izao vanim-potoana ni Karemy izao ?
Ny atony ilazana ny Fihovan’i Jesoa tarehy izao dia efa fanambarana sahady ny fitsanganan’i Jesoa ho velona, izany no tsy tokony hibanjina sy hifantoka amin’izay maha Karemy ny Karemy izay isika fa efa mitaratra sahady ihany koa ny Fitsanganan’i Jesoa ho velon amin’ny Paka. Raha araka ny Soratra Masina dia nandeha nivavaka tany an-tendrimbohitra i Jesoa niaraka tamin’ny mpianany telo lahy, i Piera i Jakoba ary i Joany, ny nisafidianan’I Jesoa an’I Piera I Jakoba ary I Joany isika dia tsy sanatria akory fitiavana manokana azy telo akory fa ho vavomombelona ny Voninahitry ny Ray ary ihany koa ny voninahitr’i Jesoa, izy ireo ary mbola izy telo lahy ireo ihany koa no teny amin’ny tanimbolin’oliva fony i Jesoa niala aina, izany hoe efa notsongain’i Jesoa mihintsy izy ireo. Amin’ny jody fahiny moa dia rehefa mihaona amin’Andriamanitra ka hivavaka dia mandeha eny amin’ny toerana avo, izany hoe eny an-tendrimbohitra raha lazaina amin’ny fomba tsotra. I Moizy teny an-tendrimbohitra no nahazo ny didy folon’Andriamanitra, i Eli teny an-tendrimbohitra no nihaona tamin’Andriamanitra. Anstoina ihany koa izy ireo fa olon’ny tendrimbohitra ra ao amin’ny Soratra Masina. Raha tarafina amin’ny fiangonana amin’izao fotoana izao, izay toerana fihaonana amin’Andriamanatra ihany koa dia ny Tilinkambo ny fampitahana ny tendrombohitra.
Raha hiverina ny eo amin’ny fihovan’I Jesoa tarehy amin’izao vanim-potoana ny Karemy izao ary isika dia voalahany natokana ho an’ireo Apostoly izay nomena ho fankaherezana azy ireo amin’ny vanim-potona mafy sy maha ory azy ireo rehefa tonga ilay andro iray izahy isamborana an’i Jesoa ka ho hampijaliana ary ihany koa Hanamafy horina sahady ny finoanan’ireo Apostoly. Ilay Jesoa nihova tarehy io nefa tsy iza akory fa Andriamanitra. Andriamanitra no tonga nankahery azy ireo nefa indro rehefa tonga ny andro nisamborana sy nampijaliana azy dia mbola nandà sy nandao an’i Jesoa izy ireo. Raha tsorina amin’ny fehezanteny iray izany dia na efa nahazo Fankaherezana avy amin’Andrimanitra makasika ny tsy maintsy hisamborana, hampijaliana sy ny hamonoana an’i Jesoa aza ny Apostoly dia mbola natahotra ka nandaho Azy ihany tamin’ny andro nisamborana Azy. Andriamanitra niteny tamn’izy telo lahy nanao hoe : « Ity ny Zanako Malalako indrindra, henoy Izy » .
Faharoa manaraka izany dia miantefa tanteraka amintsika Kristianina, amin’izao vanim-potoana ny karemy izao, fihomanana ny fo amam-panahy amin’ny Fitsaganan-ko velona amin’ny Paka miaraka amin’i Kristy. Mitondra antsika any amin’ny Paka ny Karemy, manoloana izany nefa dia misy ady, misy ezaka tsy maintsy takiana amintsika tsirairay avy ; koa inona moa izany ?
Raha ampifandraisintsika amin’ny tenin’ny Soratra Masina androany, izay manao hoe : « Omeo izay angatahin’Andriamanitra amintsika », hita taratra tao aminn’ny vakiteny voalohany izany, ny fangatahan’Andriamanitra ny hanaovana sorina ny zanany lahy tokany Abrahama. Fitsapana ho an’i Abrahama nefa izany ary noho izay fahafoizana ny zanany lahy tokana ho an’Andriamanitra izay indrindra no nanaovan’i Tompo azy ho Ray ny firenena rehetra. Tsara marihana fa Andrimanitra tsy mangataka zavatra sarotra sy mety hampalaelo antsika, tiana ambara eto dia tsy tokony matahotra ny manome isika ary tsy tokony hataotra ny hizara ihany koa.
Tafiditra ao anatin’izany ny fanaovana ny honitry ny karemy eo anivon’ny fiangonana, ny fizarana ny amin’ny namana sahirana sy ny fanaovan-tsoa rehetra maro samihafa ary ny farany ny fifadian-kanina indrindra ny zoma. Araka ny tenin’ny Soratra Masina manao hoe : « Izay ataonareo amin’ireny kely sy madinika ireny, Amiko no hanaovanreo azy » ary « Omeo izay angatahin’Andriamanitra amintsika ».